- Page 215 of 236 - Ayyaantuu Online
Ergamaa tokkoo buusanii ergamaa biraa kaa’uunis ta’e, Labsii yeroo muddamaa uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu. Baarentuu Gadaa Irraa, Gurraandhala 17, 2018 Wayyaaneen waggoota 26n darbaniif uummattoota biyyattii afaan qawweettin ukkaamsitee saamaa, hidhaa fi ajjeesaaq turtee… Read More »
Shororkeessaan Eenyu? Baarentuu Gadaa Irraa, Gurraandhala 17, 2018 Shororkeessaan eenyu? isa akkamiititu shororkeessadha? Isa walqixxummaaf falmu, isa mirga saba isaaf qabsaawu, isa dimookiraasii dhugaaf dubbatu moo isa biyya namaa weeraree mirga uummamaa fi dimookirsii namaa sarbee saamicha gaggeessu dha? isa… Read More »
Qixxeessaa Lammii | Gurraandhala 17, 2018 Qabsoo hadhaawaa gabrummaa sirna bulchiinsa Habashaa jalaa of baasuuf ummatni Oromoo jaarraa tokkoo ol geggeessaa ture taayitaa dhuunfaan jijjiiruun tasa hin danda’amu. Abbootiin garaa kan garaa isaanii quubsuuf qofa bulan har’allee akkuma kalee abjuu… Read More »